Mianara manala ny fisainana mahaolombelona
Mianara manala ny fisainana maha-olombelona
Ataovy azo antoka, fa misy Fanahy Masina ao anatinao. Ilaintsika izany satria io ilay mpananatra , Jaona 14:26 : “ fa ny Mpananatra, dia ny Fanahy Masina, Izay hirahin’ ny Ray amin’ ny anarako. Izy no hampianatra anareo ny zavatra rehetra sy hampahatsiaro anareo ny zavatra rehetra izay nolazaiko taminareo.”
Ny fananarana ao amin’ny Soratra Masina dia tsy mahafaly andro anaovana arak any Hebreo 12:11 : “ Fa ny famaizana rehetra dia tsy mba atao homahafaly andro anaovana, fa mampahory ”
Sarotra ny mananatra olon-dehibe. Isaorana Andriamanitra fa amin’ny fotoana fandrenesana ny teniny tahaka izao no tena ahazahoany mananatra olon-dehibe.
Misaora an’Andriamanitra raha mbola omeny fotoana mihaino fananarana avy Aminy.
Ohabolana 29:15 : “ Ny tsorakazo sy ny anatrano manome fahendrena”
Raha te hitombo fahendrena dia meteza mihaino fananarana tahaka izao. Araka ny Ezekiela 36:25 : “Dia hofafazako rano madio hianareo, ka hadio; ny mba ho afaka amin’ ny fahalotoanareo rehetra sy ny sampinareo rehetra no hanadiovako anareo.”
Ny rano madio eto dia ny tenin’Andriamanitra. Meteza ho sasan’io rano io.
Hoy ny teny ao amin’ny Genesisy 8:21 : “ fa ny fisainan’ ny fon’ ny olona dia ratsy hatramin’ ny fahazazany.” Nefa nomen’Andriamanitra saina sy taova ao anatin’ny loha isika. Ny tarigetrany dia ny hitoviantsika amin’i Jesosy. Hoy Paoly ao amin’ny 1 Korintiana 11:1 :“Aoka hanahaka ahy hianareo, dia tahaka ny anahafako an’ i Kristy.” Isika rehetra tokony hanana ny fisainan’ny Kristy.
Ahoana no hahatongavana amin’izany ?
Isika dia ampianarin’Andriamanitra handeha amin’ny finoana amin’izao fahavelomantsika izao, izany hoe eto ambonin’ny tany, mba hahazahoana migoka ny fahatsaran’Andriamanitra.
Ny Soratra Masina no voalaza fa fisainan’Andriamanitra.
Mianàra manàla ny fisainana maha-olombelona, ilay vokatry ny fianarana izay nianarantsika (abidim-pianaran’izao tontolo izao hoy ny Soratra Masina).
Mila jerena tsara raha tena mifanandrify amin’izay voalazan’Andriamanitra ve ny fianarana tany ampianarana nandritra ny taona maro ?
I Paoly nampitandrina sao ho tratra ny abidimpianaran’izao tontolo izao (filosofia, siansa…)
Mizàra manomboka androany, hamafiso fa izay voalaza ao amin’ny Soratra Masina no marina.
Rehefa miteny Andriamanitra, ohatra any amin’ny Hebreo 11 “ Finoana no ahafantarantsika fa ny tenin’ Andriamanitra no nanaovana izao tontolo izao, ka dia tsy izay zavatra miseho no nanaovana izao zavatra hita izao ” dia minoa izany ianao. Izany tsy midika hoe aza mianatra filosofia na siansa fa rehefa miteny Andriamanitra hoe misy tany dia nisy tany ”. Hianarana fotsiny ireny hahalalana hoe izany no fisainan’ny tsy mino ny tenin’Andriamanitra.
Hianarana ny manàla ny fisainana maha-olombelona mba ahazahoana ny fisainan’i Kristy mandritra ny taona maro.
Ny Soratra Masina milaza fa tokony mandeha amin’ny finoana isika raha te hahita ny herin’Andriamanitra.
Araka ny Hebreo 11:6 “ Fa raha tsy amin’ ny finoana, dia tsy misy azo atao hahazoana sitraka aminy; fa izay manatona an’ Andriamanitra dia tsy maintsy mino fa misy Izy sady Mpamaly soa izay mazoto mitady Azy.”
Hebreo 11:1 : “Ary ny finoana no fahatokiana ny amin’ ny zavatra antenaina, fanehoana ny zavatra tsy hita.”
Ny ankamaroan’ny tenin’Andriamanitra izay hita ao amin’ny Soratra Masina dia tsy ho azonao raha tsy avy hatrany ianao dia manaiky.
Ny olan’ny kristianina dia tsy mahay manaiky izay voalaza ao. (ohatra : manana olana ara- tokatrano : ato anaty baiboly misy resaka tokatrano maro). Ny lakile dia ny “manaiky”.
Tahaka ny olombelona rehefa teraka dia minono amin’ny reniny na ronono (tsy misafidy), fa isika lehibe mahita azy hafahafa, tahaka izany ny Soratra Masina.
Ampifandrifio amin’izay voasoratra ny fisaianana ao anatinao mba hahatonga anao tena hahita ny herin’Andriamanitra.
Androany, manolora tena fa hain’i Jesosy ny mandamina ny fiainanao. Fa rehefa tena mijoro tsara ianao dia i Jesosy mahay mandamina zavatra.
Ho anareo zay mbola tsy manambady, aza izany no atao zavatra lehibe rehefa mivavaka, fa atolory tsara ho an’i Jesosy ny fiainanao. Hain’Andriamanitra ny mandamina ny fiainanao.
Mianàra manàla ny fisainana ato anatin’ity lohantsika ity, izay misy zavatra maro (ny fianarana maro). Aza manaiky ho voabahan’ny filosofia na siansa. Tsy hoe manohitra fa tsy izany no tokony hibaiko ny teny. Efa tamin’ny andron’i Jesosy no efa betsaka ny olona manampahaizana.
Tian’Andriamanitra ny olona raha tena hitady Azy, ka hikasika Azy, Hebreo 10:38 : “ Ary ny oloko marina dia ho velon’ ny finoana ; fa raha mihemotra izy, dia tsy sitraky ny fanahiko.”
Hianarana isan’andro izany amin’ny zavatra kely, eo amin’ny lafiny fiainana rehetra mihitsy.
Mila mitombo amin’ny zavatra atao rehetra isika, ary asio tahotra an’Andriamanitra izany.
Ny fakam-panahy dia rehefa tena mitombo ny fahasoavana. Lioka 12:15 : “ Ary hoy Izy tamin’ ny olona : Mitandrema, ka miarova tena mba tsy ho azon’ ny fieremana hianareo ; fa ny ain’ ny olona tsy miankina amin’ ny habetsahan’ ny zavatra ananany. ”
Mianàra manàla ny fisainana maha-olombelona, izay mifanohitra amin’ny tenin’Andriamanitra.
Ohabolana 16:6 : “ Ankino amin’ iJehovah ny asanao, Dia ho lavorary izay kasainao.” Efa tena nataonao va izany ? Aza mandeha ho azy fotsiny fa Andriamanitra tena mijery an’izany. Manao ahoana ny asanao ? Tena mandeha amin’ny fahamarinana ve ? Raha tsy izany dia mihena lalandava (kitapo loaka araky ny teny ao amin’ny Hagay 1:6 :“ Efa namafy be hianareo, nefa kely no taomina : mihinana hianareo, nefa tsy voky; misotro hianareo, nefa tsy afa-po; mitafy hianareo, nefa tsy misy mafana; ary izay mahazo karama dia mahazo karama hatao an-kitapo loaka.”).
Manasa anao hamaky ny bokin’ny ohabolana satria mananatra antsika.
Matoa ianao novonjen’ny Tompo dia aza ketraka mivavaka, Matio 6:6 : “ midìra ao amin’ ny efi-tranonao, ka rehefa voarindrinao ny varavaranao, dia mivavaha amin’ ny Rainao, Izay ao amin’ nymangingina; ary ny Rainao, Izay mahita ao amin’ nymangingina no hamaly anao.”
1 Korintiana 2:15 : “ Fa ny olona araka ny Fanahy kosa dia mahafantatra ny zavatra rehetra, kanefa izy tsy fantarin’ olona.”
Manàna fisainana, manàna foana fotoana mandalo ao anatin’ny Soratra Masina mba hipetrahan’ny sain’Andriamanitra ao anatinao, fa ny fahatahorana an’i Jehovah no mahaela velona.